Istanbul:-Waxaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Istanbul ee xarunta dalka Turkiga shir looga hadlayo arimaha dalka Soomaaliya kaas oo ay ka soo qeybgalayaan saxiixayaasha Road Mabka iyo 54 dal .
Shirka ayaa waxaa hurmuud ka ah xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki Moon iyo Raysal wasaaaraha dalka Turkiga Rageb Dayib Erdogan.;Shirka ayaa socon doona laba Maalmood waxaana shirka sidoo kale qeyb ka noqon doona Bulshada Rayidka iyo Odayaasha Dhaqanka Soomaaliyeed.
Shirka ayaa waxaa goobjoog ka ah Madaxweynaha DFKM Shariif Sheekh Ahmed,Raisulwasaare Gaas,Gudoomiyaha Baarlamaanka DFKM ,Madaxweynaha Puntland iyo Galmudug oo soo gaaray saaka dalka Turkiga.
Waxaa kale oo shirka ku sugan gudoomiye ku xigeenka Ahlu Sunna Maxamuud Aw-Libaax iyo Wakiilka Qaramada Midoobey ee Somalia Augistine Mahiga iyo madax ka socota Maamulka S/land.
Shirka maanta ayaa waxaa looga hadlayaa kaabayaasha dhaqaalaha sida Biyaha ,Tabarta ,Wadooyinka waxaana khudbadii ugu horeysay ka jeedshay kuxigeenka raysal wasaaraha Turkiga Beker Bozdag wuxuuna sheegay in magaalada Muqdisho ay ka soo kabaneyso ka dib ka bixitaankii Al-Shabaab.